A NA-EGBOCHI ID ID N'IHI IHE NCHEBE: IHE Ị GA-EME? - ID ID - 2019
Isi ID ID
"A na-egbochi ID ID maka ihe nchekwa": anyị na-alaghachi na akaụntụ ahụ
Mmemme ndị jikọọ na ihe nchọgharị ahụ ma rụọ ọrụ a kapịrị ọnụ, dịka ịkpọ otu ụdị vidio, a na-akpọ nkwụnye ins. Ha bụ ndị a ma ama site na nkwenye site n'eziokwu na ha enweghị interface. Enwere ọtụtụ mmemme yiri nke ahụ na-enyere aka melite ọrụ na Ịntanetị. Tụlee mmemme ndị a maka Yandex.
Modul na Yandex Nchọgharị
Ị nwere ike ịbanye na ngalaba ebe njikwa nke modul arụnyere na-arụ site na itinye iwu pụrụ iche na ebe nkwụsị:
nchọgharị: // ngwa mgbakwunye
Ugbu a, windo pụrụ iche meghere n'ihu gị, ebe ị nwere ike hazie modulu arụnyere. Anyị ga-emeso nke ọ bụla n'ime ihe ndị ọzọ.
Ịwụnye plugins na Yandex Browser
N'ụzọ dị mwute, n'adịghị ka ntanye ma ọ̄ bụ tinye-ons, apụghị itinye aka na modulu na aka. Enyere ụfọdụ n'ime ha, ma ndị ọzọ ka a ga-arịọ ka ị wụnye na akpaghị aka, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọtụtụ mgbe, nke a mere ma ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, ịnweghị ike ịlele vidiyo na ihe enyemaka. N'okwu a, windo ga-apụta na nkwenye maka itinye ihe mgbakwunye ọzọ.
Hụkwa: Extensions na Yandex. Nchọgharị: nwụnye, nhazi na mwepụ
Nwelite mmelite dị naanị na ụfọdụ mmemme, ndị ọzọ ga-emelite aka. A na-ahụ nkwụnye inshore na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na nke a emee, ị ga-enweta nyocha yiri nke a.
Mgbe ahụ, e nwere ọtụtụ nhọrọ maka mmemme:
Ị nwere ike ịkwụsị ngosi ahụ site na ịpị obe.
Gụọ ozi gbasara ngwa mgbakwunye site na ịpị akara ngosi ahụ na ozi.
Malitegharịa ekwentị na-enweghị mmelite site na ịpị "Gbaa naanị oge a".
Wụnye nsụgharị ọhụrụ site na ịpị "Melite modul".
Mgbe nkwalite ahụ, ị ​​nwere ike ịmalitegharịa ihe nchọgharị ahụ maka mgbanwe ndị ị ga-eme.
Mgbanwe mmechi usoro
Ọ bụrụ na ngwa mgbakwunye dị njọ maka ihe nchọgharị gị, maọbụ ịkwesighi ya iji nọgide na-arụ ọrụ, ị nwere ike gbanwee ya ruo mgbe ọ dị mkpa. Ị nwere ike ime nke a dị ka ndị a:
Na nbanye adreesị, tinye otu adreesị ahụ:
nchọgharị: // plugins
Chọta usoro ihe omume dị mkpa ma họrọ ihe na-esote ya. "Gbanyụọ". Ọ bụrụ na mmechi ahụ nwere ihe ịga nke ọma, a ga-eme ka ihe mgbakwunye ahụ pụta ìhè na ntụ ntụ karịa ọcha.
I nwekwara ike ime ya site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Kwado" n'okpuru usoro a choro.
Nke a bụ ihe niile ị chọrọ ịma banyere ngwanrọ software maka Yandex Browser. Biko mara na ị ga-agbanyụ ihe niile, n'ihi na nke a nwere ike ịkpata nsogbu na igwu egwu ma ọ bụ vidiyo na saịtị ụfọdụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © ID ID 2019